Akụkọ - Ọgwụ mgbochi-19 ọ na-aba uru ma ọ bụrụ na ha anaghị arụ ọrụ otu narị na 100?
Ọgwụ mgbochi covid-19 ọ bara uru ịnweta ma ọ bụrụ na ha anaghị arụ ọrụ dị ka pasent 100?
Wang Huaqing, onye isi ọkachamara na usoro ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na Centerlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mgbochi Ọrịa na Mgbochi Ọrịa nke China, kwuru na enwere ike ịnabata ọgwụ mgbochi ahụ ma ọ bụrụ na nrụpụta ya dabara n'ụkpụrụ ụfọdụ.
Ma ụzọ iji mee ka ogwu mgbochi ahụ dịkwuo irè bụ ijigide ọnụọgụ mkpuchi ya dị elu ma mee ka ọ sie ike.
N’ọnọdụ ndị dị otú a, a pụrụ ịchịkwa ọrịa ahụ n’ụzọ dị irè.
“Vgba ọgwụ mgbochi ọrịa bụ ụzọ ka mma iji gbochie ọrịa, ịkwụsị mgbasa ya, ma ọ bụ iji belata oke mgbasa ya.
Ugbu a, anyị nwere ọgwụ mgbochi COVID-19.
Anyị malitere ịgba ọgwụ mgbochi na mpaghara ndị dị mkpa na ndị mmadụ bụ isi, na-achọ ịmebe mgbochi mgbochi n'etiti ndị mmadụ site na inoculation n'usoro, iji belata ikefefe nje ahụ, ma mechaa nweta ebumnuche nke ịkwụsị ọrịa ahụ na ịkwụsị nnyefe ahụ.
Ọ bụrụ na mmadụ niile na-eche ugbua ọgwụ mgbochi abụghị otu narị pacenti, anaghị m enweta ọgwụ mgbochi, ọ nweghị ike iwulite mgbochi anyị, enweghịkwa ike iwulite ọgụ, ozugbo enwere isi iyi nke ọrịa, n'ihi na nnukwu imirikiti enweghị ọgụ, ọrịa a na-ewu ewu, nwekwara ike igbasa.
N'ezie, ọrịa na mgbasa nke ntopute nke jikoro ịchịkwa ya, ọnụ ahịa dị nnukwu.
Mana site na ogwu ogwu, anyi na enye ya n'oge, ndi mmadu na ekesa ogwu, ka anyi na enye ya, ihe mgbochi a na ebulite ya, ma oburu na enwere oria nje a agbasasia, o naghi abu oria ojoo, ya na-akwụsị mgbasa nke ọrịa ahụ dịka anyị ga-achọ. "Wang Huaqing kwuru.
Mazị Wang kwuru, dịka ọmụmaatụ, dịka akwara, pertussis bụ ajọ ọrịa abụọ na-efe efe, mana site na ịgba ọgwụ mgbochi, site na mkpuchi dị oke elu, ma na-eme ka mkpuchi dị elu dị elu, emeela ka ọrịa abụọ a na-achịkwa nke ọma, ọnụọgụ ndị na-erughị 1000 ikpeazụ afọ, ruru ọkwa kachasị ala na akụkọ ntolite, pertussis adabala n'ọkwa dị ala, Ihe a niile bụ n'ihi n'eziokwu na site na ịgba ọgwụ mgbochi, yana mkpuchi dị elu, a na-echekwa mgbochi mgbochi nke ndị bi na ya.
N'oge na-adịbeghị anya, Ministụ Ahụike nke Chile bipụtara ezigbo ọmụmụ banyere ụwa nchekwa nke ọgwụ mgbochi Sinovac Coronavirus, nke gosipụtara ọnụego mgbochi mgbochi nke 67% na ọnụọgụ ọnụọgụ nke 80%.
Post oge: Mee-24-2021